कलियुगका कुरा: अकला देवी मन्दिर र गुफाको संरक्षण खोइ ?
अकला देवी मन्दिर र गुफाको संरक्षण खोइ ?
देवीथान अकला देवी भनेपछि डेढगाउँ मात्र होइन यसका वरपरका विभिन्न जिल्लामा समेत प्रख्यात छ । नवल परासी, पाल्पा, तनहुँ, स्याङ्गजाबासीहरुले आफूलाई दुःख परेको बेला, विसन्चो भएको बेला र कुनै पनि क्षेत्रमा सफल हुनका लागि डेढगाउँ देवी अर्थात अकला देवीलाई भाकल र प्रार्थना गर्छन् । श्रावण महिना बाहेक वर्षमा एघार महिना भरी (विषेश दिन बाहेक) यस मन्दिर भक्तजनहरु आ-आफ्नो भाकल अनुरुप बली र पूजा गर्ने गर्छन् ।
देवीस्थान स्थित अकला देवी मन्दिरको चर्चा डेढगाउँ र यस वरपर निक्कै भए पनि आवश्यक संरक्षण हुन सकेको छैन । मन्दिरको संरक्षणको लागि थुप्रै समिति, उपसमिति बने तर कुनै पनि समितिले ठोस काम गरेन ।
२०५४-५५ साल तिर स्थानीय भुवन सीं सारुको अध्यक्षमा गठित समितिले केही काम गर्ने प्रयास गरे पनि त्यस्को प्रभावकारीता लामो समयसम्म रहेन । त्यही बेला तिर स्थानीय भक्त बहादुर आलेले मन्दिरकै छेउमा गुफा पत्ता लगाएपछि त्यस्को संरक्षणमा सबैजना लाग्छन् भन्ने विश्वास सबैले लिएका थिए ।
उति बेलै गा.वि.स.को सहयोगमा भुवन सीं सारुको अध्यक्षतामा बनेको समितिलाई गुफाको पनि संरक्षण गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । सो समितिले र्सवसाधारणका लागि गुफा प्रवेश खुल्ला गरेपनि एक वर्षवित्न नपाउदै समिति माथि आर्थीक अनमियताको आरोप समेत लाग्यो ।
त्यसपछि खिम बहादुर सोती मगरको अध्यक्षतामा अर्को समिति बनेको थियो । तर आज सम्म मन्दिर र गुफा संरक्षणका लागि ४-५ वटा समिति पटक पटक विघटन हुदै बन्दै गरे पनि न त उचित संरक्षण नै हुन सकेको छ न हिसाब किताब नै र्सार्वजनिक भएको छ ।
संरक्षणको अभावमा गुफा अहिले फोहोर फाल्ने स्थानको रुपमा प्रयोग भएको छ । गुफाकै शिरमा निर्माण गरिएको धारा अन्यत्र सार्ने चर्चा चले पनि त्यस तर्फकुनै प्रगति भएको छैन ।
झण्डै १०० मिटर लामो अकला गुफाको उचित संरक्षण नहुदा त्यो हाल छ भने उता मन्दिरको तल पट्टी पर्खाल बनाउन दर्ुइ वर्षअगाडीबाट उठाइएका सिमेन्टका पिल्लरहरु अलपत्र छन् ।
मन्दिरको हाल सम्मको आर्थिक पक्षको पनि पारदर्शि हिसाब किताब कतै पाईदैंन । भक्तजनहरुले चढाएका रुपियाँ पैसा, सुन, गर गहनाको लेखाजोखा पनि छैन । आर्थिक हिनामिनाको आरोप लागि वर्खास्त भएको समितिका सचिव तुलसी तिमिल्सनाले आफ्नो समितिले पारदर्शीताको लागि पहल गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँले आफ्नो समितिले कार्यभार हस्तान्तरण गर्दा एक-एक विल सहितको कागजात तत्कालिन अध्यक्ष खिमवहादुर सोती मगरलाई बुझाइएको स्मरण गर्नुभयो ।
सोतीसँग पनि यस विषयमा बुझ्न खोजियो तर उहाँले आफूले धेरै अगाडि नै अध्यक्ष पद छोडिसकेकाले सबै हिसाब किताब अहिले भन्ने अप्ठेरो पर्ने बताउनुभयो । वर्तमान अध्यक्ष तिलमाया वोहोराले पनि मन्दिर र गुफाका लागि आवश्यक संरक्षण गर्न नसकिएको स्विकार गर्नुभयो ।
यो लेख लेख्ने क्रममा भेटिएका भुवन सीह सारु, तुलसी तिमिल्सिना, जित वहादुर सारुले पनि अगाडी भएका गल्तिको जिम्मेवारी स्विकार्दै अब मन्दिर र गुफा संरक्षणमा पहल गर्ने बचन दिनुभयो ।
तर मन्दिर र गुफा संरक्षणको जिम्मेवारी चार नम्बर वडा र त्यहाँका पदाधिकारीको मात्र पनि होइन, यस गाउँकै गहना बनेको मन्दिर र गुफा संरक्षणमा हामी सबैले योगदान दिन सके मात्र डेढगाउँ देवीको आशिर्वाद सँधै हामीलाई लाग्नेछ ।